Sigma Bands - MetaTrader ဘို့ညွှန်ပြချက်4- MT4 အညွှန်းကိန်းများ
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2019
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ Sigma Bands – MetaTrader ဘို့ညွှန်ပြချက် 4
Sigma Bands – MetaTrader ဘို့ညွှန်ပြချက် 4
မာ 13, 2018
Specifically, in this indicator I have studied the movement of the price foracertain number of bars (BarsCount = 200). For this purpose, the MA withaperiod of 1 was used (MAPeriod). For that matter, any MA and any number of bars could have been used for analysis. ရလဒ်အနေဖြင့်, two channels will be plotted. One displays the limits where the price ranges 68% of the time for the specified number of bars. The other shows the limits where the price ranges 95% of the time for the specified number of bars.
The maximum price for the period (မြင့်သော)
The minimum price for the period (အနိမ့်)
Median price (မြင့်သော + အနိမ့်)/2,
Typical price (မြင့်သော + အနိမ့် + ပိတ်)/3
Weighted close price (မြင့်သော + အနိမ့် + ပိတ် + ပိတ်)/4
By learning how to determine the limits where any indicator or price ranges most of the time, I eneded up with making an example of calculating the standard deviation and Sigma implemented as this indicator. Its formulas can now be adapted for any indicator you like. Sometimes, interesting results can be obtained for indicators that are plotted in separate windows, ဥပမာ, the RSI, TVI or others.
Sigma Bands – MetaTrader ဘို့ညွှန်ပြချက်4တစ်ဦး Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Sigma Bands – MetaTrader ဘို့ညွှန်ပြချက်4သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
How to install Sigma Bands – MetaTrader 4.mq4 ဘို့ညွှန်ပြချက်?
Download Sigma Bands – MetaTrader 4.mq4 ဘို့ညွှန်ပြချက်
Copy Sigma Bands – သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှ MetaTrader 4.mq4 ဘို့ညွှန်ပြချက် / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
Right click on Sigma Bands – MetaTrader 4.mq4 ဘို့ညွှန်ပြချက်
Indicator Sigma Bands – MetaTrader 4.mq4 ဘို့ညွှန်ပြချက်သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
How to remove Sigma Bands – သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ MetaTrader 4.mq4 ဘို့ညွှန်ပြချက်4ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးAuto Fibo - MetaTrader ဘို့ညွှန်ပြချက် 4
Next ကိုဆောင်းပါးThe currency indices indicator - MetaTrader ဘို့ညွှန်ပြချက် 4
ဇွန် 7, 2018
ဇွန် 6, 2018
ဇွန် 5, 2018